गर्मीमा खरभुजा स्वास्थ्यको लागि फाइदै फाइदा
एजेन्सी सोमवार, बैशाख ४, २०७४ 3553 पटक पढिएको
एजेन्सी: गर्मी मौसम आउने बित्तिक्कै बजारमा शररीरलाई फ्रेस राख्‍ने फलफूलको माग दिनानु दिन बढ्दै जान्छ। गर्मीमा तारभूज शरीरको लागि धेरै फाइदाकारी मानिन्छ। यसले शरीरमा पानीको मात्रा पूर्ति गर्नुका साथै छालामा चमक ल्‍याउने गर्दछ। खरभुजाको फाइदा के के हुन् त ?
त्वचामा चमक ल्‍याउँछ
खरभुजा खानाले शरीरिक फाइदा पुर्‍याउनुका साथै छालामा चमक ल्‍याउँछ। यसमा पाइने एन्टी एक्सिडेन्टले त्वचामा आउने रुखोपनलाई हटाउँनुका साथै थकान मेटाउँछ। खरभुजाको टुक्रा अनुहारमा वा छालामा लगाउनाले चमक आउँछ।
यदि शरीरको तौल बढी छ भने शारीरिक तौललाई घटाउनमा खरभुजादे सहयोग गर्छ। किनकी यसमा क्‍यालोरीको मात्रा निक्कै कम रहेको हुन्छ। यसमा पानीको मात्रा धेरै हुने हुनाले पेट भरिनुका साथै तौप पनि बढ्दैन।
खरभुजाले शरीरका धेरै प्रकारका क्‍यान्सर निको बनाएको विभिन्‍न शोध र अनुसन्धानले पत्ता लगाइएको छ। यसले प्रोटेस्ट क्‍यान्सर, ब्रेस्ट क्‍यान्सर लगायत पेटको क्‍यान्सरमा धेरै फाइदाकारी मानिन्छ।
किड्नीको लागि पनि फाइदाकारी
खरभुजा किड्नीको बिरामीको लागि पनि भरपुर रुपमा फाइदा दिन्छ। यसमा रहेका अनेक प्रकारका भिटामिनले किड्नी रोगीलाई फाइदा पुर्‍याउछ। त्यसकारण गर्मीमा कोल्ड ड्रिङक्स पिउनुभन्दा खरभुजा खानु उत्तम हुन्छ।
आँखाको लागि फाइदा
तारभुजमा बेटा क्यारोटीनले भरिपूर्ण हुन्छ जसले शरीरमा 'भिटामिन ए'को कमी पूरा गर्छ। 'भिटामिन ए'ले आँखाको ज्‍योती बढाउनुका साथै आँखामा आउने धेरै प्रकारका इन्फेक्सनबाट बचाउँछ। यही कारण गर्मीमा नियमित रुपमा तारभुज खानु स्वास्थ्यको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
शनिवार, असोज २८, २०७४ कैलालीमा एक हजारले एचआइभी विरुद्धको औषधि खाँदै
राम राज्यको प्रतीक तिहार 1905
घरघरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिँदै 5298
दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज अन्‍योलमा 5308
को बन्ला मुख्यसचिव ? 12781
सी जिनपिङका पाँच वर्ष: व्‍यक्तिगत अधिकार बढ्‍यो, देशको लागि खतरा 21403
यसरी छानौं तिहारमा शुद्ध खानेकुरा 2058
सुर्खेत र जाजरकोटको सीमाना कालिखोलामा बस दुर्घटना : एकको मृत्यु 388
नेवार समुदायको मौलिक पर्व म्हःपूजा 2097
भारतीय सीमा सुरक्षाबलद्वारा खेत जोत्नमा रोक 21586
तस्बिरमा लक्ष्मीपूजा र दीपावली 1945
टेलिकमले कात्तिकभर नि:शुल्‍क यूसिम बाड्‍ने 28945